Ọ bụrụ na onye ọ bụla ekpebie ime uche Chineke, ọ gaamata ma ozizi a ọ bụ nke m ma ọ bụkwanụ nke si nꞌebe Chineke nọ pụta.
Mgbe ahụ, ọ kpọrọ ndị na-eso ụzọ ya na igwe mmadụ nọ nꞌebe ahụ ka ha bịa nso. Mgbe ha bịara, ọ gwara ha okwu sị, “Ọ bụrụ na onye ọ bụla achọọ iso m, ya gụọ ndụ ya dị ka ihe furu efu. Mgbe ahụ ya buru obe ya so m nꞌazụ.
 Nke a bụ ndụmọdụ m na-enye unu. Kweenụ ka Mmụọ Nsọ na-achị ndụ unu, ịgwa unu ihe unu ga-eme, ma ọ bụ ebe unu ga-aga. Nke a ga-eme ka unu hapụ imezu ihe ọjọọ ndị ahụ anụ ahụ ochie unu chọrọ ka unu mee. Nꞌihi na ihe anụ ahụ ochie anyị chọrọ bụ ime nanị ihe ọjọọ ahụ megidere ihe Mmụọ Nsọ chọrọ ka anyị mee. Ihe ọma ọ bụla anyị na-eme mgbe Mmụọ Nsọ na-achị ndụ anyị abụghị ihe ndụ anyị chọrọ. Ọchịchọ nke ndụ anyị na ọchịchọ nke Mmụọ Nsọ anaghị adakọta. Nke a mere o ji bụrụ na ịgba mgba na-adị mgbe nile nꞌuche anyị, mgbe anyị chọrọ ime ihe ọ bụla, nꞌihi na ọchịchọ nke Mmụọ Nsọ na ọchịchọ nke anụ ahụ anyị na-agbalị ịchị mkpebi anyị banyere ihe ọ bụla anyị chọrọ ime.